ढुक्क हुनुहोस् ! टोड्केमा खानाबस्नलाई समस्या छैन् | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
घर विविध कार्यक्रमहरु टोड्के महोत्सव २०७२ ढुक्क हुनुहोस् ! टोड्केमा खानाबस्नलाई समस्या छैन्
ढुक्क हुनुहोस् ! टोड्केमा खानाबस्नलाई समस्या छैन्
१७ फाल्गुन २०७२, सोमबार १०:२२
म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीबाट करिव १४ किलोमिटरमा अवस्थित पर्यटकीयस्थल टोड्केमा आगामी फागुन २५ देखी २९ गतेसम्म दोस्रो टोड्के महोत्सवको आयोजना गरिएको छ । जिल्लाकै पर्यटकीय गन्तब्यका रुपमा विकास भएपनि महोत्सवमा खाना र बस्नको ब्यवस्थापनका बारेमा समेत चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ । महोत्सवस्थल आसपासमा ३ वटा घर रहेकाले पनि महोत्सवमा जानेहरूलाई खाना र बस्नको बारेमा चिन्ता भइरहेको बेलामा आयोजकले ढुक्क भएर महोत्सवमा आउन अनुरोध गरेको छ ।
महोत्सवमा आउनेलाई लक्षित गरेर टेन्ट सहित खाना र बस्ने ब्यवस्था मिलाइएको छ । ‘निश्चित शुल्क लाग्नेछ । हामीले महोत्सवस्थलमै टेन्टको ब्यवस्था गरेका छौ’ महोत्सव मुल आयोजक समितिका संयोजक मोहन बहादुर खत्रीले बेनीअनलाइनलाई भने । उनका अनुसार एकल, र तीनजना सम्म सुत्न मिल्ने टेन्ट टोड्क आसपासमा राखिने छ । जसमा विहान र बेलुकीको खानाको समेत ब्यवस्थान गरिने छ । करिव १ सय वटा टेन्टको ब्यवस्था गरिएको छ । ब्यवसायीक भन्दा पनि टेन्ट ढुवानी र भाडालाई आधार मानेर शुल्क निर्धारण गरिने आयोजकले जनाएको छ । त्यस्तै अतिथि र खेलाडी, कलाकारलाई पुर्णगाउँ र झिँमा ब्यवस्था गरिएको छ ।
दुवै गाउँबाट महोत्सव स्थलमा पुग्न करिव आधा घण्टाको पैदलयात्रा लाग्छ । म्याग्दीका साथै जिल्ला बाहिरबाट समेत पर्यटकहरूको आगमन हुने भएकाले पनि ब्यवस्थापन गरिएको टोड्के क्षेत्र विकास कोषका उपाध्यक्ष बाबुराम आचार्यले बताए । ‘सुरक्षित हुन्छ ।हामीले उद्घाटनकै दिन सबै ब्यवस्थापन सक्छौ’ उनले भने । पर्यटनमन्त्री आनन्द प्रसाद पोख्रेलको प्रमुख आथित्यतामा उद्घाटन गरिने महोत्सवबाट संकलन भएको रकम धार्मिक तथा पर्यटक स्थल टोड्के क्षेत्रको प्रचारप्रसार, भौतिक संरचना निर्माण, स्थानीय उत्पादन,सामुदायिक लज, भि–टावर निर्माण लगाएतका पूर्वााधार बनाउने योजना समेत रहेको छ । एकैपटक ५ हजार दर्शक गएपनि बस्ने र खानेको ब्यवस्थापन गर्न सकिने आयोजकको भनाई छ ।
रातो, सेतो लगाएतका १६ प्रजातिका लालिगुँरास पाइने भएकाले पनि बेनी तथा आसपासका क्षेत्रबाट बनभोज सहित गुराँसमा रमाउन जाने गर्दछन् ।
पाखाभरी धकमक्क फुलेका गुराँस, हिमश्रंखला, स्थानीय प्रजातीका मुला,आलु यहाँको प्रमुख आर्कषण मानिन्छ। समुन्दी सतहदेखी तीनहजार मिटर उचाईम अवस्थित टोड्केबाट १६ वटा भन्दा बढी हिमश्रं्खला तथा सुर्योदयको अवलोकन गर्न सकिन्छ । २०६५ साल चैत्र २१ देखी २५ गतेसम्म पहिलो गुराँस महोत्सवको आयोजना गरिएको थियो । हरिकृष्ण गौतम